Iindaba-Ukungeniswa kweMveliso yePolypropylene (PP-R) Imibhobho yaManzi ashushu naBandayo
Imibhobho ye-PP-R kunye nokufakwa kusekwe kwipolypropylene engacwangciswanga njengeyona nto iphambili eluhlaza kwaye iveliswa ngokungqinelana ne-GB / T18742. I-Polypropylene inokwahlulahlula ibe yi-PP-H (i-homopolymer polypropylene), i-PP-B (ibhloko ye-pololymer polypropylene) kunye ne-PP-R (i-copolymer polypropylene engahleliyo). Udonga Umbhobho incence umatshini udlala indima ebalulekileyo kwimveliso umbhobho. I-PP-R zizinto ezikhethiweyo kwimibhobho ye-polypropylene yamanzi ashushu nabandayo ngenxa yokuxhathisa ixesha elide koxinzelelo lwe-hydrostatic, ukuguga kwe-oksijini ixesha elide kunye nokusebenza kunye nokubumba.
Yintoni ityhubhu ye-PP-R?
Umbhobho we-PP-R ukwabizwa ngokuba yimbhobho yohlobo lwe-polypropylene. Yamkela ipolypropylene yekholomu ngokungacwangciswanga ukuba ikhutshelwe kumbhobho, kunye nenaliti ebunjiweyo kumbhobho. Luhlobo olutsha lwemveliso yombhobho yeplastiki ephuhlisiweyo kwaye yafakwa eYurophu kwii-1990s zokuqala. I-PP-R ivele kwi-80s yasemva kwexesha, kusetyenziswa inkqubo yokunyanzeliswa kwesigaba segesi ukwenza malunga ne-5% ye-PE kwityathanga le-molekyuli ngokungacwangciswanga nangokufanayo (njenge-copolymerization engaqhelekanga) ukuba ibe sisizukulwana esitsha semibhobho. Inokuchasana nefuthe elifanelekileyo kunye nokusebenza kwexesha elide.
Ziintoni iimpawu zemibhobho ye-PP-R? Umbhobho we-PP-R unezi zinto zilandelayo:
1.ngekho yityhefu kunye nococeko. Iimolekyuli ezibonakalayo ze-PP-R zecarbon kunye nehydrogen kuphela. Akukho zinto eziyingozi nezityhefu. Zicocekile kwaye zithembekile. Azisetyenziswanga kuphela kwimibhobho yamanzi ashushu nabandayo, kodwa ikwasetyenziswa nakwiinkqubo zamanzi okusela acocekileyo.
2.Ukugcina ubushushu kunye nokonga umbane. Ukuqhutywa kobushushu bombhobho we-PP-R yi-0.21w / mk, eyi-1/200 kuphela yombhobho wentsimbi.
Ukumelana nobushushu 3.good. Indawo yokuthambisa yetyhubhu ye-PP-R yi-131.5 ° C. Obona bushushu busebenzayo bunokufikelela kuma-95 ° C, anokuhlangabezana neemfuno zeenkqubo zamanzi ashushu ekwakheni ubonelelo lwamanzi kunye neenkcukacha zokuhambisa amanzi.
Ubomi inkonzo 4.Long. Ubomi obusebenzayo bombhobho we-PP-R bunokufikelela ngaphezulu kweminyaka engama-50 phantsi kobushushu obusebenzayo be-70 ℃ kunye noxinzelelo lokusebenza (PN) 1.OMPa; Ubomi benkonzo yobushushu obuqhelekileyo (20 ℃) ​​bunokufikelela ngaphezulu kweminyaka eyi-100.
Ukufakwa 5.Easy kunye nonxibelelwano oluthembekileyo. I-PP-R inentsebenzo elungileyo ye-welding. Imibhobho kunye nokufakwa kunokudityaniswa sisinyibilikisi eshushu kunye nombane, ekulula ukuyifaka kunye nokuthembeka kumalungu. Ukomelela kwamalungu axhumeneyo kukhulu kunamandla ombhobho ngokwawo.
6.Materials zinokuphinda zisetyenziswe. Inkunkuma ye-PP-R iyacocwa kwaye ityunyuzwe iphinde iphinde isetyenziselwe ukuvelisa umbhobho kunye nemibhobho. Isixa semathiriyeli ehlaziyiweyo ayidluli kwi-10% yemali iyonke, engachaphazeli umgangatho wemveliso.
Yeyiphi eyona ntsimi yesicelo iphambili yemibhobho ye-PP-R?
1. Inkqubo ebandayo neshushu yamanzi, kubandakanya neenkqubo zokufudumeza embindini;
Inkqubo yokufudumeza esakhiweni, kubandakanya umgangatho, ukucoca kunye nenkqubo yokufudumeza;
Inkqubo yokuhambisa amanzi esulungekileyo yokusela ngokuthe ngqo;
Inkqubo yeCentral (esembindini) yomoya opholileyo;
Iinkqubo zombhobho zemizi-mveliso zokuhambisa okanye ukukhupha imithombo yeendaba yemichiza.